Ma leedahay badan videos AVI oo doonaya in ay ku soo biiraan galay mid ka mid video file leh AVI joiner freeware ? AVI software video joiner kuu ogolaanaya in aad ku biiri aad AVI video files in hab fudud. Waxaad u baahan tahay oo keliya in aad ku darto videos aad rabto inay ku soo biiraan barnaamijka oo ku dhufatey "biir" button. Waxaa jira joiners dhab ahaantii badan AVI lacag la'aan ah halkaas oo halkan waxaan Liiska 10ka joiners AVI lacag la'aan ah oo aad u.
Ka hor inta aanan bilaabin, su'aal muhiim ah. Haddii aad raadinayso dheeraad ah muuqaalada video tafatirka video ka sokow ku biiro, waxaan si adag ugu talinaynaa ah software video tafatirka fudud weli awood leh loo magacaabay Wondershare Filmora (asal ahaan Wondershare Video Editor) . Sidaa daraadeed, aad si xor ah noola, isku shaandheyn, ku biiro, kala, goo videos, iwm iyo dar video saamaynta guurka. Download oo isku day inaad si xor ah.
Easy Video Joiner ma caawin karaan oo kaliya in aad ku biiri files AVI, laakiin sidoo kale MPEG (Mpg), dhexena (Media Real) ama wmv / ASF (Window Media) files. Waa arrin aad u sahlan in ay isticmaalaan oo ku biiri kartaa videos degdeg ah. Waxaad ku dari kartaa sida badan files AVI sida aad jeceshahay oo kuu diyaarin si video ay si xor ah. In qasabno yar, waxaad u tagi kartaa badan videos AVI galay file a movie waaweyn.
Free Video Joiner waa freeware video joiner kaas oo u saamaxaya in aad isu geeyo videos fudayd. Waxa ay taageertaa soo biiray AVI, wmv, MOV, MPEG, Mpg, iwm, sidaas darteed waxaa la oran karo waa sida AVI joiner freeware. Waxa aad u baahan tahay inaad samayso waa in ay doortaan videos AVI aad rabto in aad ku biiri oo iyaga ku dar barnaamijka ah, ka dibna sheeg folder Ahaado iyo doortaan qaab wax soo saarka, ka dhacay "biir" si ay u bilaabaan soo biiray AVI videos for free. Waxa kale oo aad ku biiri kartaa qaabab kala duwan video galay mid ka mid qaab video. Just la soco in video saarka waxay yeelan doonaan isku dherer iyo width ah daray video hore.
Pro 3. Saciiro Media
Tani qalab Windows ku salaysan fudud bixisaa xal video tafatir oo looga gol leeyahay in loo sidoo kale kuu ogolaanayaa inaad la warbaahinta kale sida cajalado maqal ah shaqeeyaan. Iyadoo qalab aad awoodi kartaa in la isu geeyo wmv, AVI, MPEG oo kale qaabab video galay mid ka mid file movie dhamaystiran. Pro Saciiro Media waa software ah badan loo awood badan tafatir oo u oggolaan doonaa in aad si loogu badalo videos iyo files audio, videos edit iyo sidoo kale audio, gubi videos oo nuqul ka audio iyo sidoo kale qabashada video iyo record audio. Iyadoo Pro Saciiro Media waxaad samayn kartaa saamaynta video, maareeyaan warbaahinta kala duwan, la abuuro oo isku dubaridi playlists, iyo ciyaaro videos shaashad buuxda.
Xirfadlayaasha isticmaali this video adag qalab ku biiro inuu ku biiro qaabab video kala duwan si loo soo saaro filimada final in mid ka mid ah tiro ka mid ah qaabab warbaahinta caanka ah. Iyadoo Ultra Video Joiner aad ku milmaan karo kala duwan video files iyo soo saaro file weyn sida AVI, wmv, MP4, dhexena (Media Real), iyo MPEG. Joiner Tani waxay awood leh si fiican u la shaqeysaa tiro balaadhan oo ah qaabab file ka mid yihiin Divx, ASF, Xvid, MOV, 3GP, MKV iyo FLV. Waxaad ku dari kartaa lambarka mid ka mid ah files si aad dooratay iyo iyaga habayn siyaabo kala duwan sidaad doonaysid. Ultra Video Joiner mar hore ka mid kasta video encoder iyo decoder si aadan u baahan tahay wax download codec kale ee aad joiner video si ay u shaqeeyaan.
Tani waa xoog badan video ku biiro qalab kuu ogolaanaya inaad si ay ugu biiraan badan qaabab video galay mid ka mid qaab hal shaqeeya. Tafatirka Tan iyo qalab ku biiro yimaado leh maalmood 30 lacag damaanad dib si aad isku dayi kartaa khatarta alaabta lacag la'aan ah. The ImTOO Video Joiner waa awood ku biiro qaabab sida MKV, AVI, wmv, MPEG, FLV, ASF, DAT, MOV, HD Video, iyo qaabab kale. Users ee Windows ku faraxsan qalabka sida waxay si fiican u shaqeeyaa dhufto ee Windows iyo daboolayaa kala duwan ee qaabab file ka badan joiners kale oo ku saabsan suuqa doonaa. Muuqaalka muhiimka ah ee qalabkan waa awood u leh inay ku eegaan faylka video asalka ah, tirada video dhigay, oo wuxuu taagay heerka jir ah u video tayada kaamil ah, oo waa wayn waxtar u leh labada users khibrad leh oo cusub. ImTOO Video Joiner waa degdeg iyo si fudud ka shaqeeya.
6. AHV Video Editor
Tani qalab oo isu bixisaa awoodda labadaba video soo biiray iyo video qaybsama. Qalabkani waxa uu u badan loo Windows kuu ogolaanaya in aad ku shaqeeyaan sida Pro ah sidii aad u isticmaali kartaa in aan kala tagno oo ay ku biiraan videos qaabab badan oo kala duwan. Qaabab waxaa ka mid ah wmv, MPEG, MOV, Quicktime, MPEG2, FLV, MP4, 3GP, YouTube, iyo Flash. Saarka Your final waxaa lagu qori karaa mid ka mid ah tiro balaadhan oo ah qaabab video oo aad ku raaxaysan karaan videos aad saxar ka sii.
Tani dhamaystiran video qodan software ayaa la sheegay in ugu fiican ee suuqa sida ay timaado buuxa ee qaababka in faa'iidada iyo amateurs labada isticmaalaan. The Corel Video Studio oggolaanayaa tayo soo biiray oo qaybsama of videos qaab file kasta iyo wax soo saarka ee tayo sare video saarka. Tani waa software Windows in qoreysa cusub naqshadaha 64-yara xoog iyo toddoba barnaamijyadooda saamayn wax ku ool ah. Kuwan codsiyada dheeraad ah oo aad soo saari kartaa filimada buriyay dhakhso on fudud ah si ay u isticmaalaan interface. Si dhakhso ah waxaad awoodi doontaa inaad si ay u geliyaan filimada tayada xirfadeed ee YouTube ee DVD raaxo loogu talagalay ama ujeeddooyin ganacsi.
Iyada oo ay taasi qalab la yaab leh oo aad isku dari kartaa kala videos si fudud oo dhaqso leh qasabno yar. Waxaa fudud in la isticmaalo oo dhan waxaad u baahan tahay inaad samayso waa in jiidi oo hoos u faylasha aad galay Murayaad loogu talagalay soo biiray files. Marka aad u dhig si aad rabto, dooro "Run AVI Joiner" button. Waxaad u baahan doontaa in ay si cad u baro codsiga si loo badbaadiyo video ah soo saarka final meel aad u soo ceshano karo iyo xasuuso inaad haysato kordhinta .avi.
Joiner video Tani ayaa markii hore loo yaqaan AVI / MPEG / dhexena / wmv Joiner laakiin waxa ay sii wadaan in ay bixiyaan dadka isticmaala leh awood ay ku milmaan ama ku biiro badan oo qaabab video galay mid ka mid video kala joogsi lahayn si fudud oo si deg deg ah. Boilsoft si fiican u la shaqeysaa dhexena (Media Real), MP4, ASF / wmv, 3GP, AVI, iyo MPEG. Iyada oo kaliya dhowr qasabno of mouse aad si deg deg ah soo saari kartaa dhererka clip buuxa oo ah in uu leeyahay oo dhan isku xigxigta, aad doonayay.
Joiner video Tani waxay ka dhigi kartaa in ka badan laba videos wada galay file hal isticmaalaya qaabab video ugu caansan ay ka mid yihiin Xvid, MPEG, dhexena, 3GP, AVI, iyo DivX. Barnaamijkan waxa si sahlan loo isticmaali sida aad u baahan tahay oo dhan waa inay jiidi clips aad galay interface iyo inuu iyaga ku darmado in qaabka wax soo saarka doortay. Freeware Tani waa aalad fudud oo degdeg ah u isticmaala laylis.
Taas ayaana dhameystiray liiskan toban video joiners waxtar leh aad u bilaabi kartaa. Qaar ka mid ah waxaa laga heli karaa si xor ah halka kuwo kale la heli karaa kharash ah. Waxaa laga yaabaa inaad ka heli version tijaabo ah joiners waxaa laga yaabaa in aad u baahan tahay si aad u iibsato oo u oggolaan doonaa in aad isku daydo software ka baxay a. Just qaataan waqti si aad u hesho qalab sax ah kaas oo ku habboon si aad video biirtay baahida.
> Resource > Video > Top 10 Best AVI Joiner freeware inuu ku biiro AVI Video Files